« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16
Hira sy Salamo
Noely 2013 an-tsary
Torinteny am-polipitra audio
Lahatsoratra be mpamaky
Nitoeran'ny devoly aho fa nafahan'i Jesosy
Novonjen'i Jesosy tao anatin'ny ditra
Fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano
Ho avy Jesosy
Tsotra nefa diso
Nous avons 173 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka
Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :
Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.
Amin'ny fonay rehetra
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao
Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.
Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).
Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com
Amin'ny fonay rehetra.
Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona
Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay
Torinteny henoina en ligne
Mankanesa eto amin'ny Menu an-kavia eto, klikeo ny Torinteny am-polipitra Audio dia mazotoa mihaino torinteny audio
Ny maha Baiboly ny Baiboly
Écrit par M A Daoud |
Ny maha Baiboly ny Baiboly dia ny fisian’ny zava - dehibe sy fampianarana tahaka ireto sasantsasany ireto ao :
Andriamanitra no namorona ny olombelona.
Lavo ny olombelona ka tsy nankato an’Andriamanitra. Nandidy fanamelohana mandrakizay any amin’ny helo noho ny heloky ny olombelona Andriamanitra.
Nanomana lalana hamonjena azy Andrimanitra (amin’ny alalan’i Jesosy).
Mety ho voavonjy ny olona raha manaiky ny lalan’Andriamanitra sy izay noheveriny hamonjena azy.
Ny lalam - pamonjen’Andriamanitra dia ny nahafatesan’i Kristy ho antsika sy ny nanavotany antsika raha tokony hahazo tombon - tsoa amin’izany isika ka ho voavonjy. Mazava ny fampianaran’ny Baiboly fa ny tenantsika no tsy maintsy mibebaka sy miova fo ary manaiky amim - pinoana izay efa nomanin’Andriamanitra ho antsika (ny tenan’ny olona no tsy maintsy manam - pinoana alohan’ny hahavoavonjy azy).
Miverena any Betela 008
Écrit par Atoa sy Rtoa M.A. Daoud
Mba nozahanao ve ny bokin' ny fiainam-panahinao ? Moa voalaminao ara-dalàna ve ny kaontinao amin' ny Tompo ? Aiza ny voady Izay nataonao ny voalohan' ny volana janoary ary ny faharoan' ny volana janoary 1966 ? Nanokana fotoana vitsivitsy tao amin’ ny miafina ianao tamin' izany fo­toana Izany hivavahana sy hangatahana amin' Andriamanitra hoe : "Satria efa novonjenao aho, dia aoka aho ho azo ampia­saina hamonjy fanahin' olona ho Anao". Nandray andraikitra ianao hivavaka ho an' ny fianakaviana rehetra tsy mbola voa­vonjy. Nanao fanekena ianao fa hamaky toko 3 na 4 isan' andro ao amin' ny Baiboly. AIZA IZAO IRENY VOADY IRENY ? Nahomby ve ny devoly hanosika anao ho any Sekema toa an' i Jakoba ? Sa mbola ao Betela ianao, sa efa eny an-dàlana mankany Sekema ?
Toy izao no tena FIFOHAZANA
Rehefa ny olona eny amin’ny arabe no matahotra ny hiloa-bava hamoaka teny manohitra an’Andriamanitra fandrao hianjeran’ny FITSARAN’ANDRIAMANITRA ; REHEFA NY MPANOTA ampangorohoroan’ny FANATREHAN’ANDRIAMANITRA, mangovitra eny an’arabe ka mitalaho famindrampo ; rehefa mifofofofo mamaky vohitra sy ny tanana ny hery tsy TAKATR’OLOMBELONA « FANAHY MASINA », ka mahazo mafy ny olona amin’ny fiaikena mampivarahontsana, na dia tsy nisy FIVORIANA manokana na FAMPIELEZANA akory aza ; rehefa ny trano fiasana na fivarotana no manjary POLIPITRA ; ka manjary ALITARA FISORONANA NY FO rehetra, ary ny TRANO FONENANA tonga « TOERA-MASINA FIVAVAHANA », ka malemy fihetsika eo anatrehan’ANDRIAMANITRA ny olona « DIA IZANY NO FIFOHAZANA ».
Nahaverezana be dia be ny hevitry ny teny hoe « FIFOHAZANA » ankehitriny, izao taranaka indray miaina izao, izay tsy mbola nahita maso akory ny fiasa-MAHERIN’ANDRIAMANITRA tamin’ny FIFOHAZAM-PANAHY LEHIBE eran’ny firenena, toy izay niseho teo amin’ny taranaka teo aloha, dia tsy mahazo an-tsaina tsara ny haben’ny « FAMANGIANA ».
Fahamasinana sy Fakam-panahy 3 (tohiny)
Écrit par M A Daoud
TSY NY FAKAMPANAHY no mahatonga ota fa ny filavoana lefona amin' ny fakam-panahy.
Tonga eo amin' ny saina aloha ny FAKAMPANAHY... io no ambaratonga voalohany indrindra amin' ny fakampanahy. Avy eo dia tafafindra any amin' ny fitaovam-pandrenesana izany, ny filàna, ny faniriana ary ny fihetseham-po, dia manambara ny loza raha sendra voahetsiky ny faniriana ireo... Tonga eo amin' ny am­baratonga saro-pady eo amin' ny fakampanahy izany izao, tsy voa­tery hisy fanamelohana anefa. Raha toa ny fon' ny olona tsy voato­lotra manontolo ho an' Andriamanitra, ny fakam-panahy dia mety hahita fandraisana tsara ao anatiny ao ! Tsy mbola tonga ny fana­melohana anefa, raha tsy efa lalaina sy omena làlana ilay soso­kevitra ratsy. (Mandefitra zavatra izay fantany fa ota ny olona sasany... raha tokony hanohitra ny ota ; Izany dia mitranga mate­tika amin' ny ray aman-dreny manoloana ny zanany... Notapahin' Andriamanitra ny hatok' i Ely noho ny nanaovany izany). Raha ny sitrapo miteny amin' ny fakampanahy hoe tsia, resy izay ny mpan­kafanahy, ary mivoaka MANOATRA NOHO NY MPANDRESY ilay olona ; Deraina ny Tompo.
Fahagagana sy misiona - 010
Écrit par JANE COLLINS DAOUD
St Germain, … Cabo Rojo
Fantatro fa lehibe ny fitorianteny tany Fajardo nefa nahatsapa hatrany aho fa mbola maro ihany koa ireo toerana tokony homena anjara mba handre ny Tenin’ny Tompo. Noho izany, nankany St Germain aho, tanàna iray eny am-pitan’ny Nosy . Nanao fahagagana ny Tompo satria nampitsahatra ny orana izy saika hanaparitaka ny olona mangetaheta sy ireo izay marary Izy. Indray andro, nisy ankizy kely iray niangavy anay mba hivavaka ho an’ny vehivavy iray izay tsy afa-mihetsika eo ambony fandriana. Nalemy nandritra ny roa taona izy, hany ka tena nanahirana tokoa na dia ny manohana azy hiala eo amin’ny fandriany aza. Tsy maintsy fahanana amin’ny sotro izy rehefa hihinan-kanina, satria malemy avokoa ny rantsam-batany rehetra, eny, simba mihitsy na dia ny sainy aza. Tsy mbola nandre Tenin’Andriamanitra efa hatramin’ny ela izy, noho izany, nilaza tamin’ilay ankizy kely aho hoe : “Tsaratsara kokoa raha entina amin’ny fiara fitondrana marary mankany amin’ny fitoriana Filazantsara izy toy izay izaho no mankany an-tranony”. Dia nataon’izy ireo izany. Nosokafan’izy ireo ny varavarana rehefa tonga ny fiara fitondrana marary ary nametraka azy teo amin’ny toerana izay ahafahany mandre tsara ny Tenin’Andriamanitra. Ireo zanany efa manambady kosa dia liana tanteraka tamin’ny fihainoana ny Tenin’ny Fiainana mahagaga. Nitsiky tam-pitokiana ilay zanany vavy, rehefa nanomboka nivavaka ho an’ny marary aho, ka nanao tamiko hoe : “Aza adino i Mama”. “Eny” hoy aho namaly, “Ampitsangano amin’ny Anaran’i Jesosy izy. ” Nihazakazaka sy feno fanantenana nanatona ilay fiara misy ny reniny izy rehefa nahare izany. Niantso azy aho raha nahita izany finoana goavana izany : “Andraso fa hiaraka aminao koa aho”. Niditra tao anaty fiara izahay, ary tonom-bavaka kely fotsiny no nataonay, nandidy azy hitsangana amin’ny Anaran’i Jesosy avy eo, nanetsika ny tongony niaraka tamin’izay ravehivavy. Nipetraka nahitsy tsara izy ary nasandrany ny tanany, sitrana tanteraka izy noho ny herin’Andriamanitra ary afaka niresaka sy nisakafo tsara izy, tena faly tamin’ny zavatra azo tao anatin’ny fivoriana tokana izy ka naniry ny mbola hoentina hiverina eo indray mba hahafahany mandray ny zavatra zay efa nomanin’Andriamanitra ho an’ny tsirairay. Nentina tao amin’ny fotoam-pivavahana indray izy ny ampitso alin’iny ary napetraka teo ambonin’ny seza ary efa afaka mikasika ny tany ny tongony.
Paska iray tsy hay hadinoina tany Martinika
Martinika dia nosy frantsay any amin’ny ranomasin’i Karaiba, ao amin’ireo nosy vitsivitsy ao atsimon’i Portoriko. Manana helo-dranomasina malalaka sy mahafinaritra izy io. Mangamanga maha-te hizaha aok’izany ny ranony, fatratra ihany koa ny toetrandro, ary ny zava-maniry dia mahatonga ity nosy kely ity ho toy ny paradisa. Noho ireo antony ireo dia maro amin’ny mpanakarena avy any Eoropa no tonga mandany ny andro fialan-tsasatra any Martinika, miharo amin’ny filalaovana sy ny fahotana.
Tamin’ny Paska 1905 dia sambo lehibe 12 avy any Eoropa no hita niantsona teo amin’io helo-dranomasina io, ireo mpandeha rehetra kosa nanakalaza ny karemy teny amoron-dranomasina niaraka tamin’izay mety ho faharatsiana rehetra noho ny fetin’ny Mardi Gras.
Verset du jours
Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy
Jesosy Mamonjy Ankorondrano
Jesosy Mamonjy France
Baiboly malagasy, anglisy, frantsay miaraka
Tinao ve ny site-ntsika
Votre IP : 54.90.86.231
Copyright © 2011. © Lalamasaka Hatry ny Ela.
Ce Site est la propriété entière de © Lalamasaka Hatry ny Ela.
La reproduction du contenu (ou similaire) de ce site est totalement interdite, de plus, la loi l'interdit.